Isikhathi sokufunda: 2 imizuzu
Uma ibhizinisi lakho lokuthengisa noma le-ecommerce belilokhu libhekene nobhadane kanye nokukhiya, ungahle ufune ukusebenza isikhathi esengeziwe ku Imikhankaso Yosuku Lwezithandani njengoba kubonakala ukuthi lo kuzoba unyaka wokuqopha ukusetshenziswa kwemali - yize kunezinselelo zomnotho! Mhlawumbe ukuchitha isikhathi esiningi ekhaya nabantu esibathandayo kushisa amalangabi othando… noma kudinga ukuthi silungise (ukuhlekisa).
Ucwaningo lweNational Retail Foundation lubikezela ukuthi abathengi bahlela ukusebenzisa imali elinganiselwa ku- $ 196.31, phezulu 21% ngaphezu konyaka odluleIrekhodi langaphambilini le- $ 161.96. Imali kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 27.4 billion, inyuke ngo-32% kusuka kwirekhodi lanyakenye elingama- $ 20.7 billion.
Izibalo ze-Valentine's Day Ecommerce
Ngokusho the Isisekelo Sokuthengisa Sikazwelonke, Usuku lukaValentine aluseyona nje usuku ukukhombisa ukwazisa kwakho ngothando lomuntu oshade naye. Abathengi bathenga izipho zabanye babo ababalulekile, izingane zabo, othisha babo, osebenza nabo… ngisho nezilwane ezifuywayo! Abangu-15% baseMelika baze bazithengele isipho sosuku lwezithandani.
Ukuchitha Komthengi - abathengi bathi bazosebenzisa isilinganiso esingu- $ 30.19 kumalungu omndeni ngaphandle kwabashadile, inyuke kancane isuka ku- $ 29.87 ngonyaka odlule; $ 14.69 kubangani, kusuka ku- $ 9.78; $ 14.45 ezinganeni ofunda nabo kanye nothisha, zisuka ku- $ 8.63; $ 12.96 kubalingani osebenza nabo, kusuka ku- $ 7.78; $ 12.21 ezifuywayo, kusuka ku- $ 6.94, naku- $ 10.60 kwabanye, kusuka ku- $ 5.72.
Usuku lwezithandani zezilwane ezifuywayo - Abathengi abangama-27% bathi bazothenga izipho zikaValentine ezifuyweni zabo, okuyisibalo esiphezulu emlandweni wocwaningo futhi esenyuke ngamaphesenti ayi-17 ngo-2010 ngemali eyi-1.7 billion.
Ukuchitha Ngeminyaka - Iminyaka engu-18-24- kuhlelela ukusebenzisa imali elinganiselwa ku- $ 109.31. Iminyaka yobudala engama-25-34 ijwayele ukuba nemali ephezulu nezingane ezingayithenga futhi zilindele ukuchitha u- $ 307.51. Iminyaka engu-35-44 ngabasebenzisi abakhulu kakhulu ku- $ 358.78.
Ukusetshenziswa kwemali ngokobulili - Njengakunyaka ngamunye wocwaningo, abesilisa bahlela ukusebenzisa imali engaphezu kwabesifazane ngo- $ 291.15 uma kuqhathaniswa ne- $ 106.22.
Izigaba Zokuthenga Eziphezulu Zosuku Lwezithandani
Usuku Lusuku - $ 4.3 billion izosetshenziselwa ubusuku obukhethekile ngabangu-34% babahlanganyeli boSuku Lwezithandani.
Candy - $ 2.4 billion izosetshenziswa ngabathengi abangu-52% abahlela ukubamba iqhaza ekunikezeni izipho ngoSuku Lwezithandani - kanti u-22% uhlela ukunikeza ushokoledi.
Jewelry - $ 5.8 billion izosetshenziswa ngama-21% wababungazi abahlela ukubamba iqhaza.
Flowers - $ 2.3 billion izosetshenziswa ngabangu-37% abahlela ukubamba iqhaza.
Amakhadi ezipho - $ 2 billion izosetshenziswa kumakhadi ezipho kulo nyaka.
Amakhadi Okubingelela - Kuzosetshenziswa u- $ 1.3 billion emakhadini okubingelela oSuku Lwezithandani.
Izigaba ezingezansi zifaka amathuluzi, ubulungu bokuzivocavoca, imishini yezemidlalo, izinto zasekhishini, izilwane ezigxishiwe… nama-mixtapes (abantu bayakwenza lokho ?!).
Imikhankaso Yosuku Lwezithandani
Hlala wazi ukuthi imali isabambile kubathengi abaningi kulo nyaka futhi ababambiqhaza abaningi ekunikezeni izipho ngoSuku Lwezithandani bazokwenziwa ngomzuzu wokugcina… ngakho-ke qalisa imikhankaso yakho futhi ubagcine beqhubeka kuze kube sosukwini ongaletha ngalo!
Sabelane ngenye indatshana kanye ne-infographic nabanye imibono emikhulu yomncintiswano we-Valentine's Day Social Media!
Tags: candychocolateukuziphatha kwabathengiezokuhweba ngekhompyuthaAmakhadi wesiphoamakhadi okubingelelaHallmarkjewelryukuthandaUsemathandwenizokudlaRetailersusuku luka-Valentineusuku lwe-valentine infographicUkusetshenziswa kwemali kwabathengi kosuku luka-ValentineIzipho Zosuku LwezithandaniUkusetshenziswa kwemali yokuthengisa yezinsuku zika-ValentineUkuthengwa kosuku lwezithandani
I-SimpleTexting: Ipulatifomu yokuthumela imiyalezo nge-SMS nangombhalo